China Corten flower imbiza mveliso kunye nabathengisi | Hongyi
I-Corten yentsimbi yeentyatyambo ezinkulu ezityala ngaphandle zenziwe ngentsimbi yecorten, enokusetyenziselwa ukutyala iintlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo. Umtyali weCorten Steel uyilelwe ngendlela elula kodwa esebenzayo, edumileyo eOstreliya nakumazwe aseYurophu. Ngaphandle koko, ukuxhathisa kwayo ukugqwala kunokuma kuvavanyo lwexesha, abantu akufuneki bakhathazeke malunga nokucoca umba kunye nobomi bayo.
Singenza naluphi na uyilo olutsha njengombono wakho olungileyo okanye imifanekiso, ukubonelela ngomzobo we-CAD simahla.
I-Laser isike isikwere sentsimbi yokutyala icorten yentsimbi
Imbiza / isityalo seentyatyambo
60cm * 40cm * 40cm okanye wena njengoko isicelo
Ikhaya / umhombiso ongaphandle
5-7 ixesha lokusebenza
Malunga neentsuku ezingama-45 emva kokufumana iiodolo ezisemthethweni
1. Izinto eziphathekayo ziya kuba nomtsalane ngakumbi njengoko ixesha lihamba.
2. Ngenxa yale ndawo irusi, kulula ukuyisebenzisa.
3. Ke iya kuba lukhetho olufanelekileyo ukubeka esi sikrolo kumhombiso wegadi.
4. Singayenza ngobukhulu obahlukeneyo, iya kuhlangabezana neemfuno zabathengi.
1.Sibonelela ngenkonzo yenyathelo elinye, uyilo, imveliso kunye nokupakisha.
2. Umgangatho ophezulu, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo enhle.
3. Inkonzo ye-OEM, ye-ODM enikiweyo.
Intsimbi yeCorten-Rust Surface enomaleko wokukhusela
ICorten luhlobo lwesinyithi esidla ngokuba yimozulu ngokwendalo ngokuhamba kwexesha, kwaye siphuhlise umhlwa onomtsalane okhuselayo. Ngokwenene kuyindida, nangona irusi, ukuya kwinqanaba, umphezulu ngokwenene unomaleko okhusela ngokuchasene nokubola okungaphezulu.
Ngamanye amagama, intsimbi ivumelekile ukurusa ukuze yenze ukhuseleko. Olu luhlu lokukhusela lukhula ngenxa yezinto ezisebenzayo kwii-alloys zensimbi.
Iphinda ihlaziye ngokuqhubekayo xa iphantsi kwempembelelo yamanzi kunye neoksijini.
Yenza owakho umboniso owonwabisayo kunye nezityalo zakho ozithandayo kule ndawo yokutyala intle. Ngomgangatho wayo ophilayo kunye nomhlaba, usebenza kakuhle ngakumbi egadini, uqaqambisa izityalo ezinemibala eqaqambileyo kunye nezitena ezintle.
Umfanekiso ongasekunene ubonakalisa ukuba umtyali uzakujongeka kanjani xa efika kuqala nangaphambi kokuba umaleko okhuselayo uqale ukwenza, kujongeka njengokufana nesityala sentsimbi. Ukuba unqwenela, unokukhawulezisa inkqubo yokurusa ngokusebenzisa ilaphu kunye nokuhlikihla umphezulu ngetyuwa kunye / okanye iviniga.
Ukupakisha: I-foam ethambileyo ngaphakathi kunye neplanga ngaphandle
Ukuhanjiswa: Kwiintsuku ezingama-25 emva kokufunyanwa kwedipozithi
Okulandelayo: Ishushu ityhubhu yentsimbi ikhabhoni ityhubhu yentsimbi